स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. यादव अझै ३ दिन अस्पतालमै रहने, वीरको सेवाबाट निकै प्रभावित भएको प्रतिक्रिया – Health Post Nepal
स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. यादव अझै ३ दिन अस्पतालमै रहने, वीरको सेवाबाट निकै प्रभावित भएको प्रतिक्रिया
२०७६ मंसिर १ गते १९:१४
छाती रोग विशेषज्ञ डा. ढुंगानाको संक्रमण अनुभूति –‘शारीरिकभन्दा मानसिक थकान बढी’
उपचार खर्च कत्ति पनि नहुनेले समेत उपचारसेवा पाउने मुलुककै पुरानो र ठूलो केन्द्रीय अस्पताल वीर पछिल्लो समय भिआइपीको समेत आकर्षण बन्दै गएको छ । स्वयम्ले लामो समय चिकित्सकीय अभ्यास गरी अहिले समग्र देशकै स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव शुक्रबार उपचारका लागि वीरमा भर्ना भए ।
मेरुदण्डको दुखाइ लिएर अस्पताल भर्ना भएका मन्त्री यादव अझै ३ दिन अस्पतालमै रहने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् । मन्त्री यादवको उपचारको नेतृत्व गरिरहेका डा. राजीव झाका अनुसार ३ दिन उपचारसँगै आराम गरेपछि मात्र उनलाई डिस्चार्ज गरिनेछ ।
उपचाररत मन्त्री यादवले सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध भएकाले निजीमा धाउनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाका लागि प्रइभेटमै जानुपर्छ भन्ने सोच बदल्दै सरकारी सेवाको अनुभव गरेर मात्र धारणा बनाउनुपर्ने उनको आशय थियो । उनले वीरको सेवाबाट अफू निकै खुसी र प्रभावित भएको प्रतिक्रिया दिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ ।
शरीरको ढाडबाट सुरु भएको नसा तल खुट्टासम्म आएको हुन्छ । राज्यमन्त्री डा. यादवको ढाडको बीचको भागमा अलिकति नसा दबिएको डा. झा बताउँछन् । डा. झाका अनुसार नसा थोरै मात्रामा दबिए पनि दुखाइ भने धेरै नै हुने गर्छ, जसले गर्दा सीधा हिँड्नदेखि लिएर बस्नसमेत हुँदैन ।‘हिजोभन्दा आज उहाँको स्वास्थ्यमा धेरै सुधार आएको छ,’ डा. झा भन्छन्, ‘उहाँको नसा च्यापिएका कारण सुन्निएको छ, जसलाई औषधिको माध्यमबाट सुकाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मन्त्रीज्यूलाई अझै ३ दिन अस्पतालमा राखेर उपचार गरिनेछ ।’
मेडिकल रिपोर्टअनुसार मन्त्री यादवको मेरुदण्डको ‘एल–४एल–५ डिस्प्रोग्यास’ भएको छ । नसा च्यापिएका कारण मन्त्री यादवको बायाँ खुट्टामा दुखाइ भएको छ । पछिल्लो समयमा पनि मन्त्री यादव वीरमा उपचार गराउने पहिलो भिआइपी भने होइनन् । यसअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको लेखा समितिका सभापति भरत शाहले वीर अस्पतालको भिआइपीकक्षमा भर्ना भई शल्यक्रियासहितको उपचारसेवा लिएका थिए । त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकुमारी चौधरी घुँडाको समस्या लिएर गत वर्षको मंसिरमा अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् ।
केही वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निमोनिया हुँदा वीरमा भर्ना भएर उपचार गराएका थिए । युवा नेता गगन थापाले समेत आफ्नी श्रीमतीको पत्थरीको शल्यक्रिया वीरमै गराएका थिए । त्यसैगरी, केही महिनाअघि नेकपा नेता लीलामणि पोखरेल पनि दुवै मिर्गौलामा रहेको जटिल पत्थरीको शल्यक्रिया गराएका थिए ।
कस्तो छ वीर को भिआइपीकक्ष ?
वीरमा हत्तपत्त प्रयोगमा नआउने भिआइपी र भिभिआइपी क्याबिनसमेत छ । वीर अस्पतालको दक्षिणतर्फको भवनको दोस्रो तलामा उक्लनेबित्तिकै ‘भिआइपी क्याबिन’ देख्न सकिन्छ । ढोकाबाट पस्नेबित्तिकै दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ करिडोर छन् । दाहिनेतर्फ भिआइपीकक्ष छ, जहाँ सुविधायुक्त बेड, सोफा, एयरकन्डिसन, एटेज बाथरुम, राम्रा बत्ती तथा पर्दाहरू छन् ।
वीरमा उपचारका लागि आवश्यक सबैजसो सेवा–सुविधा उपलब्ध छन् । सिटी स्क्यान, एमआरआईलगायतका अत्याधुनिक उपकरण वीरमा उपलब्ध छन् । भिआइपीहरूले उपचारका लागि विदेश रोजेकाले एकातिर यहाँका स्रोत–साधन त्यसै खेर गइरहेका छन् भने अर्कोतिर राज्यकोषको करोडौँ रुपैयाँ बिदेसिरहेको छ । देशका ठूला नेता तथा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएर बाह्य देश जानुको सट्टा स्वदेशमै उपचार गराएमा एकातिर देशको ढुकुटी रित्तिने थिएन भने अर्कोतर्फ उनीहरूका नाममा ठूलो लगानीमा निर्मित यस्ता कक्षको सदुपयोग हुने थियो । यससम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । वीरबाट पछिल्लो समय वार्षिक साढे ३ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणले ओपिडीसेवा लिँदै आएका छन् ।
Tags: डा. सुरेन्द्र यादव, भिआइपीकक्ष, वीर अस्पताल